Akụkọ - uniquezọ 4 pụrụ iche iji ahịhịa artificial
Enwere ike iji turfị wuruwuru n'ọtụtụ ụzọ maka ogige, ụlọ, yana ebumnuche azụmahịa. Ga - eji ihe eji eme ihe na - enweghị atụ, ọ ga - eju gị anya. Enwere ike iji ahịhịa wuru na ọ bụghị naanị n'ihu ụlọ gị na n'azụ ụlọ gị, kamakwa n'ụlọ, ụlọ mgbatị ahụ, ọfịs, enwere ike iji ya mee ihe ịchọ mma maka mmemme ọ bụla ma ọ bụ oriri. Ahịhịa wuruwuru nwere ike ime ka oghere ndị a dị mma ma baa uru. Gbanwee oghere ọrụ gị.
Arfik wuru nwere ike tinye ihe na-acha akwụkwọ ndụ na ebe ọrụ ọ bụla, site na echiche mbụ na ikuku dị jụụ. Tụlee ugboro ole ị batara n'ọfịs na etu isi dị gị. Gbakwunye ọhụụ ọhụrụ na ebe a na-anabata gị ma ọ bụ ime ụlọ nzukọ, ị nwere ike igosi ndị ahịa, ndị ọrụ nchegbu gị gbasara mpụta nke ụlọ ọrụ ahụ. Gini kpatara igbu oge igbanwe oghere ulo oru izugbe? Maka na ị nwere ike iji ahịhịa wuru welie mma nzukọ.
Mma mma ime
E nwere ọtụtụ ụzọ i nwere ike iji wuru turf ịgbakwunye mara mma imewe ọcha n'ụlọ gị. Mgbe oge ọkọchị ji nwayọ amalite ịpụta, gịnị ma ị jiri turf mee ka onye na-agba ọsọ okpokoro maka ogige gị ma ọ bụ ebe a na-amịkpọ anụ? Ọ bụrụ na ịchọghị ntụgharị, ị nwere ike iji paịmatị ahịhịa eji aka ya dochie ọnụ ụzọ nke n'ihu? Tinye ụfọdụ agba na mkparịta ụka, nke nwere ike ịmalite tupu ọbịa ahụ abanye n'ime ụlọ ahụ. Mpaghara ụmụaka na ime ụlọ ihi ụra. Nwere ike iji ahịhịa artificial kama ahịhịa ahịhịa iji mee ka ogige ahụ meghee ebe ntụrụndụ n'afọ niile. E nwere ebe dị nro n'okpuru etiti ịrịgo, slide na swing, nke na-agaghị aghọrọ ụrọ ọbụlagodi na mmiri ozuzo.
Gini mere iji kee ụmụaka maka ihi ụra? E nwere ọtụtụ ụzọ iji jikọta turf artificial na isiokwu ndị a ma ama iji mee ka ime ụlọ nwatakịrị bụrụ ihe pụrụ iche. Nwere ike iji ime ụlọ ụmụ anụmanụ na-ehi ụra, ụlọ ihi ụra nke bọọlụ, ma ọ bụ jiri ahịhịa wuru wuru iji mepụta kapeeti iji chekwaa ego. Mee ka ụlọ ọrụ ubi gị ka mma.
You maara na ha agaghị akpọ ya turf wuru ma gbasaa ahịhịa wuru n'elu arịa ụlọ ogige iji mee ka ọ dị ka nka ọgbara ọhụrụ. Fortgwọ nkasi obi na mmezi dị oke ala, ị nwere ike tinye ya n’ubi ahụ, jiri mmiri mmiri sachaa ya, chekwaa oge gị, ọ ga-akpọnwụ ngwa ngwa, yabụ ozugbo mmiri zoo, ị nwere ike ịlaghachi zuru ike. Jieyuanda artificial turf ga-eji obi gị niile jeere gị ozi.